Masoarabo: Taombaovao miavaka! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2018 8:39 GMT
(Lahatsoratra efa tamin'ny volana Janoary 2008)
Ny Taom-baovao no fotoana handinihana ny lasa sy hamolavolana drafitra vaovao ho an'ny ho avy. Inona no lazain'ireo bialogera avy amin'ny tontolo Arabo satria manao veloma farany ny taona 2007 izao tontolo izao ary handray ny taona 2008?
The Big Pharaoh mandinika ny taona lasa, manolotra antsika fomba fijery momba ny olana tany Libanona, ny herisetra tao Iraka sy ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana. Tamin'ity farany ity, nanoratra izy hoe:
Manentana ahy ny vinavinan'ny vehivavy filoham-pirenena ao amin'ny Trano Fotsy saingy tsy mino izaho manokana fa mety amin'i Clinton ny asa. Ny 4 Novambra, John McCain no tiako ho voafidy. Izy irery no hany manana traikefa takian'io toerana io. Fantatro fa tsy manentana firy ny Repoblikana Hardcore i McCain, saingy amin'izao fotoana izao, mampiseho ny fitsapan-kevitra fa izy irery ihany no afaka mandresy an'i Hillary.
Ho an'i Ejipta, hoy i Big Pharaoh:
Tsy dia nisy zavatra betsaka ho an'ny fireneko ny taona 2007. Na izany aza, mino aho fa ny zavatra manan-danja indrindra nitranga dia ireo hetsi-panoherana nataon'ireo mpiasa sy mpiasan'ny governemanta. Heveriko fa mbola hahita bebe kokoa an'izany isika indrindra raha nanapa-kevitra hampitsahatra ny fanampiana ny governemanta.
Iraq Pundit mijery ny fomba nitantaran'ny haino aman-jery ny fankalazana ny Taombaovao ao Iraka rotiky ny ady tao amin'ity lahatsoratra ity. Nofaranany toy izao ny filazany:
Ankehitriny izany no antsoiko hoe tatitra voalohany. Mirary soa amin'ny fahazoana ny Pulitzer, ry zalahy.
AM, monina ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra, nihevitra fa sambany hankalaza ny alin'ny faran'ny taona tsy miasa tao anatin'ny 10 taona izy. Manazava izy:
10 taona taorian'ny niasana ny alin'ny faran'ny taona, tafapetraka ihany amin'ny seza lavako ny tenako, mankafy sehatra mahafinaritra sy mangina mandritra ity fotoana ity. Voahodidin'ny loviako feno fromazy sy tavoahangy Pinot Griggio, telecommande sy finday, toy ny nofinofy lasa tanteraka izany ho an'ny mpiasa hotely tsy miasa, indrindra taorian'ny sakafo hariva Krismasy miaraka amin'ny fianakaviana.
Vakio ny ambin'ny lahatsoratra raha hijery ny fivadihan'ny alina momba ity mpiasan'ny hotely ity.
Mbola ao UAE, e3ashig, dokotera, mizara ny fanapahan-keviny ho an'ny taona vaovao ato. Izao avy:
- Ho olona tsara kokoa azo atonona sy hanampy ireo manodidina ahy.
– Mivavaka bebe kokoa.
-Mifandray, mifandray, mifandray amin'ny olona.
-Mamarana ny fampiofanana ara-miaramila izay nandreraka ny lohako nandritra ny taona maro.
– Manomboka fihariana vaovao.
Ahmad, izay mibilaogy ao amin'ny Cold Desert, manontany tena ny antony hankalazan'ny olona ny taom-baovao. Hoy izy nanoratra:
Mampihatra ny fahaiza-manao arithmetika ianao satria tsy maintsy manao fanisana mihemotra mialoha ny sasakalina.
Aza manary fotoana ahafahana manosika ny fetranao. Azonao ampiasaina io fotoana io mba hitsapana ny fahazakanao alikaola. Ahoana ny fisotroanao toaka?!
Inona no fomba tsara kokoa hampitsaharana ny taona Gregoriana raha tsy ny manampy ireo trano fisakafoanana, dokambarotra, sns … mahazo vola hanombohana harena amin'ny taona manaraka? Aza adinoina fa hanampy ireo mpihira sy mpandihy vaovao mba hahazo vola amin'ity fihenahenana ara-toekarena ity koa ianao.
Vakio ny ambin'ny lahatsorany mikasika ny antony hiheverany ny hankalazana ny taombaovao.
Bilaogera Syriana Yazan, mipetraka any Japana, miandrandra taona 2008 miavaka. Nanoratra izy hoe:
2008, taona izay toa resy lahatra aho fa hahatalanjona. Ary nanomboka tsy tahaka izany.
Nanana fanombohana tsara lavitra aho tamin'ity taona ity, manantena aho fa toy izany koa ny hafa.
Faly aho fa afaka mampirina ny taona 2007 any amin'ny fahatsiarovana ratsy, ary miandrandra ity taona vaovao ity.
Mbola any Syria, bilaogera an-tsary Hovic manolotra antsika ny sehatry ny fankalazana ny Taombaovao avy ao amin'ny firenena, jereo ato.
Avy any Jordania, Hareega koa mirary taona mahafa-po ho an'ireo mpamaky azy. Hoy izy nanoratra:
Milaza ny olona hoe “manantena fa hanana taona vaovao mahatalanjona ianao”
Tiako ny maniry taona vaovao mahafa-po ho an'ny rehetra, taona vaovao azo ekena, tsy misy loza lehibe
Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra, Khadija Teri avy any Libia mamarana ny taonany amin'ny fanontaniana sy valiny. Amin'ireo fanontaniana 18, manontany izy ary mamaly:
16. Inona no zavatra very taminao tamin'ity taona ity?
Lakilen'ny fiara! Nitsidika olona iray tao amin'ny Hopitaly khadara aho ary nampiditra azy tao am-paosiko. Rehefa nivoaka aho dia tsy hita ny lakile ary fijaliana izany satria tany amin'izy ireo ny fanairana ny fiara tamin'ny fanalahidy ka tsy maintsy nanolo ny fanalahidy sy ny fanairana ihany koa aho. Ary nandany fotoana nanolo ny fanairana aho, nanao izany taorian'ny fandrobàna ny fiarako sy nangalarana ny auto-radio.
Mirary taombaovao ho anao!